Pixel4၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်ထွက်ပေါ်လာသည်။ နောက်ကင်မရာနှစ်ခုအတည်ပြုသည် Androidsis
တရက်အကြာတွင်သူတို့ထခဲ့သည် Pixel4၏အချို့ပြန်ဆိုချက်များ အရာက၎င်း၏နောက်ကျောအပေါ်တစ် ဦး စတုရန်း၏ပုံသဏ္inာန်အတွက်ဓာတ်ပုံပြပွဲ module တစ်ခုအသေးစိတ်။ သူတို့ကဆိုလိုသကဲ့သို့ဤသည်ငါတို့ကိုကောင်းစွာကိုက်ညီ Google သည်နောက်ကင်မရာနောက်ဘက်အာရုံခံကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုနောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းတွင်ရွေးချယ်လိမ့်မည်.
အထက်ဖော်ပြပါပြန်ဆိုမှုများအားလူသိများပြီးနောက်ကျန်ရှိနေသေးသောအယူအဆကိုအတည်ပြုရန်ယခုတွင်ဂူးဂဲလ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ပထမဆုံးတရားဝင်စမတ်ဖုန်းပုံရိပ် ၎င်းသည်နောက်ကင်မရာ module အပြင်၎င်း၏နောက်ကျောဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအတည်ပြုသည်။ ပိုမိုရှာဖွေ!
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Google ကသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ကုန်၏ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်နှင့်လအနည်းငယ်အတွင်းရောက်ရှိလာမည့်မျှော်လင့်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်နောက်ကွယ်မှစိတ်ဝင်စားမှုကိုကျေနပ်စေရန်တွစ်တာတွင်တင်ထားသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ line pixel 3.
ကောင်းပြီ, အချို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိပုံရသည်ကတည်းက, ဒီမှာသင်သွား! သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုမြင်သည်အထိစောင့်ပါ။ #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1
- ဂူဂဲလ် (@madebygoogle) ကဖန်ဆင်း ဇြန္လ 12, 2019
per se, တွစ်တာတွင်ပူးတွဲပါသည့်ပြန်ဆိုချက်သည် Pixel4ကိုအနက်ရောင်နှင့်၎င်း၏စတုရန်းပုံကင်မရာ module နှင့်ပြသသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကင်မရာ module ကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာမြင်စေပြီး၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ၎င်းတွင်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုပါ ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် LED မီးရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည်။
ပို၍ အသေးစိတ်သေချာစေရန်, နောက်ကင်မရာများသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပြီး LED flash မှာအောက်ခြေတွင်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်လေဆာအာရုံစိုက်တဲ့အပိုင်းဟာဘာလဲထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်။ Flash ၏ညာဘက်မှအနည်းငယ်မီလီမီတာအကွာအဝေးသေးငယ်သည့်အပေါက်လည်းရှိသည်။ ငါတို့မသေချာဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမိုက်ကရိုဖုန်းတစ်လုံးအတွက်အပေါက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
Google Pixel4သည် frames နှင့် notch တို့အားနှုတ်ဆက်လိမ့်မည်
နောက်ကျောတွင်လက်ဗွေစကင်နာမရှိပါ၊ In-display fingerprint scanner တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ Pixel4တွင်အနက်ရောင်ခြယ်သသည့် volume rocker အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြူရောင်ပါဝါခလုတ်ရှိသည်ကိုလည်းပြသသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Pixel 4: ဒါက Google ရဲ့နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့နောက်ဖက်မှာတရားဝင်ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်
Motorola One ၏လှုပ်ရှားမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်မကြာခင်ထွက်ပေါ်လာတော့မည်ဖြစ်သည်